Madaafiic cul culus oo xalay ku soo dhacay xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho
Madaafiic cul culus oo xalay ku soo dhacay xaafado ka mid ah Magaalada Muqdisho .
Waxaa xalay saq dhexe magaalada Muqdisho laga maqlaayay dhawaqa Madaafiic hoobiyeyaal ah oo ku soo dhacaayay qeybo ka mid ah xaafadaha Muqdisho, iyadoo madaafiicdu ay ku soo dhacday degmooyinka Boondheere iyo Wardhiigley, oo ku dhow xarunta Madaxtooyada Villa Somalia.
Dhawaqa a madaafiicda oo inta badan laga maqlayay xaafadaha Muqdisho ayaa bilowday saqdii dhexe ee xalay, iyadoo bartilmaameedka duqeymahan ay ahayeen Madaxtooyada ayaa madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmooyinka Boondheere iyo Wardhiigley.
Madaafiicahaan ayaa waxaa ku dhaawacmay ilaa 4-ruux, iyadoo maamulka degmada Boondheere uu uu sheegay inay u gurmadeen dadka ku waxyeeloobay madaafiicdii xalay ka dhacaysay magaalada Muqdisho..
Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in madaafiic ku dhacay Wardhiigley ay jiraan kuwaasi oo khasaare gaystay, hase ahaatee lama haayo tiro rasmi ah oo ku waxyeeloobay madaafiicdaasi xalay soo dhacaysay.
Webset ku hadla Codka Shabaab ayaa lagu qoray in 7-Madaafiic hoobiyeyaal ah lagu garaacay madaxtooyada, kuwaasoo ku kala dhacay albaabka hore iyo gudaha xarunta Madaxtooyada sida lagu daabacay boggaasi taageera Al-Shabaab oo lagu magacaabo Somalimemo.
Dhanka kale ma jirto ilaa iyo wax war ah oo ka soo baxay Hey'adaha ammaanka dowladda oo maalmihii u dambeeyay sheegaayay inay qaadayaan tallaabooyin lagu xaqiijinaayo ammaanka Caasimada Muqdisho iyo deegaanada laga saaray Al-Shabaab.